September 14, 2020 3 min read By wardeeq news Reporter
Lesbos, Griiga – Badhtanka hadhaagii gubtay ee mar ahaan jiray xerada qaxootiga ee Moria waxa ku yaal buug yar oo uu ka tegey mid ka mid ah kumanaanka qof ee u soo orday si ay u badbaadiyaan noloshooda markii dabku ka kacay xerada qaxootiga ee ku fidaysa Lesbos.
Hal bog, jumlado kooban oo aasaasi ah. Buugga waxaa iska lahaa qaxooti reer Afgaanistaan ​​ah oo isku dayaya inuu barto Ingiriisiga, maadaama ay isku dayeen inay nolol cusub ka bilaabaan dagaal.
“Waa maxay cayaaraha aad ugu jeceshahay”, “Isboortiga aan ugu jeclahay waa kubada cagta”, “Maxaad ku qabataa waqtigaaga firaaqada ah”, “Inta badan waxaan barto buuga”, “Waa maxay dhalashadaada”, “Waxaan ahay Afgaanistaan”.
Isaga ama iyadu waxay u badan tahay inuu ka mid yahay kumanaanka qof ee hada u soo haray raadinta jawaabaha jidadka Lesbos.
Tan iyo markii uu dabku socday usbuuc ka hor, oo ay ku dhinteen qiyaastii 13,000 oo qof hoy la’aan, kumaan kun ayaa ku seexanayay hareeraha waddooyinka iyo maxkamadaha hore ee maxkamadaha.
Xero ku meel gaar ah oo u dhow ayaa loo dhisay in ay dejiyaan qaar ka mid ah dadkii horay u deganaa magaalada Moria, laakiin waxaa jira walaac laga muujinayo qorshooyinka xarunta soo dhaweynta joogtada ah ee qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Lesbos.
Dadka deegaanku way diideen qorshahan, shaqaalaha samafalku waxay qabaan walaac bini’aadanimo, qaxootiguna waxay ka baqayaan in xaruntu u ekaato xabsi, taasoo ka dhigaysa inay awoodi waayaan inay nolol cusub ka bilaabaan wadamada kale ee EU.
Mudaharaadyadu, iyadoo booliska ay sunta dadka ka ilmeysiisa ku ridayeen dibadbaxayaasha, saxafiyiintuna si weyn loogu diiday inay galaan goobta ay kumanaanka qof jiifaan labadii maalmood ee la soo dhaafay, xaaladdu waa kacsan tahay.
Sida ay booliisku sheegeen, “hawlgal militari” ayaa socda waxaana jiray amarro ka soo baxay taliyaha booliiska oo ahaa in saxafiyiinta laga fogeeyo aagga.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Socdaalka ee Giriigga, hadda waxaa jira ku dhowaad 300 qof xerada cusub ee ku-meel-gaarka ah, oo awood u leh qiyaastii 3,000 oo qof.
Lesbos Fire – Maxaa xigi doona
Wiil u dhashay Afghanistan ayaa sitay boodh ay ku qoran tahay ‘Waxaan u baahanahay nabad, xorriyad’ intii lagu guda jiray mudaaharaadkii nabadeed ee 12-kii Sebtember, oo lagu dalbanayay in loo oggolaado inuu ka baxo jasiiradda Lesbos. [Anna Pantelia / Al Jazeera]
Mid ka mid ah aabbaha dhalinyarada ah ee ka soo jeeda Afghanistan, oo maalmo seexday jidadka, ayaa ku tilmaamay inuu dareemayo culays iyo inuu ka walwalsan yahay tagista xerada cusub ee ku meelgaarka ah iyada oo aan la joogin xaaskiisa, oo ay inta badan go’aanno muhiim ah la gaadho.
Dabka ka dib, waxaa la seexiyay isbitaal waxaana looga tagay isaga oo daryeelaya lixdooda carruur ah, oo uu ku jiro ilmo siddeed bilood jira.
Kuwii ku noolaa dariiqyada waxay dareemayaan inay ka tageen “Yurub” ay rajaynayeen markay badda ka gudbaan si ay u gaaraan Griiga.
“Qof walba wuu ogyahay waxa dhacaya,” ayay tiri Marzia, oo 27 jir ah, oo ku kor boodaysa cunugeeda oo saddex bilood jira. “Angela Merkel way na aragtaa indhahana way ka xirtay. Waxaan halkan u imid caruurtayda mana jirto cid ii furatay wadada.”